Ngabe amasondo eBontrager ahle? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ukubuyekezwa kwamasondo eBontrager - ungaxazulula kanjani
Ukubuyekezwa kwamasondo eBontrager - ungaxazulula kanjani
Ngabe amasondo eBontrager ahle?
I-Bontragerube ngumdlali wesikhathi eside ku-carbon fiber yokuncintisanaisondoemakethe, kanye ne-Aeolus Pro 3 TLR yayoamasondokuyisinqumo esiqinile nxazonke ngokuhambisana okungenasifo,kuhleukusebenza kwe-braking, ukuqina okunokwethenjelwa nesivinini ngobuningi. Babukekakuhle, futhi, ngezinqumo ezingekho ngaphansi.Okthoba 11 2018
Kufanele uthande ukuletha ucezu olusha lobuchwepheshe kubhayisikili lakho. Futhi namhlanje sinenhlanhla emangalisayo ngoba uBontrager usicelile ukuthi benze i-Aeolus XXX yabo entsha sha, abathi ilula ukuyibuka nokuyigibela, ibe namandla kakhulu futhi izinzile kunamamodeli wangaphambilini - yebo, nokuthi yikuphi okungcono lapho ungahamba khona kunase amagceke ezinto ezifakwayo eFlanders eBelgium? (umculo we-R & B we-elekthronikhi) Uchungechunge lwamasondo i-Aeolus selunesikhathi lukhona manje, lwasungulwa emuva ngo-2011. Kepha uBontrager manje usekhiphe uchungechunge olusha ngokuphelele, iminyaka emithathu isathuthuka kanye nokwakhiwa kabusha okuphelele - yebo, futhi kunezinhlobo ezintathu lolu chungechunge olusha.
Ngakho-ke sine-XXX 2s, i-XXX 4s ne-XXX 6s enama-millimitha ayi-28, ama-47 no-60 millimeters ngokulandelana. Zonke lezi zinhlobo zitholakala njengezinguqulo zama-disc brake kanye nama-brim brake kanye namathayi we-clincher kanye ne-tubular. Futhi inguqulo ye-clincher ayihambisani nesifo sofuba.
Namuhla uMat ugqoka ama-XXX 6 lapho ku-Orbea yakhe, ngaphandle kwalokho nginezinto ezithandeka kakhulu ze-XXX 2 kuTrek Emonda yami. Ngokuphinda kwakhiwe kabusha, iBontrager izibekele umgomo wokusebenza kwe-aerodynamic Ukucwenga la masondo ngokuqhathaniswa nebanga langaphambilini le-Aeolus futhi ngasikhathi sinye ukuwenza awakhanyise, izinto ezimbili ezibalulekile kwi-wheelet-top-end. Kepha into enkulu kimina ngutshalomali abalwenzile ukwenza la mabhayisikili azinze ngendlela emangalisayo ezimweni ezivunguzayo. - UBontrager uthe esivivinyweni abasigijimile, le sethi entsha yamasondo ingcono kunomncintiswano wokujula kobude obufanayo kuzona zontathu izinto uMat abekhuluma nje ngazo.
Futhi njengoba uMat esanda kusho, ukuzinza kwe-crosswind kuyinto enkulu ngempela. Akukhathalekile ukuthi amarimu akho asemoyeni kangakanani, ngeke kukusize kakhulu ukushaywa ibhayisikili nokuhlala kudoti eceleni komgwaqo. Manje ukujula komphetho wesondo langemuva akwenzi mehluko omkhulu ekuzinzeni kwe-crosswind, ngakho-ke ngisengasebenzisa irimu ejulile noma isondo lediski ukuyivivinya ngaphandle kokukhathazeka. Kepha phezulu lapha, lapho ungathola khona ukuqondisa kwakho, indaba ehlukile leyo.
Kamuva ngaphezulu. (R&B umculo we-elekthronikhi) - Uma ulungile manje, Dan, ake siqale ngokubhekisisa amasondo ami. Yebo, ngilithanda kakhulu iqoqo lamasondo e-aero, kepha bangazizwa sengathi bahlelekile kancane ngezikhathi ezithile ezimweni ezibandayo.
Konke okudingekayo ukuvunguza komoya omkhulu ukukhulisa ukuzethemba kwakho, futhi sonke besikhona - yingakho iBontrager igxile kakhulu ekuthuthukiseni ukuzinza komugqa wabo omusha wemikhiqizo. Bathumele inqwaba yabashayeli emgwaqeni ngezinsuku ezinomoya becela ukuthi babhale kahle ukuthi bazizwa bengazinzile kahle ngenxa yomoya onamandla. Ukusuka kulokhu, bakwazile ukucacisa izimo zomoya eziqondile ezenza abashayeli bathuke kakhulu bese bephinda bezibandakanya lezo zimo zokuhlolwa komhubhe wabo womoya.
Futhi bathi lo mugqa omusha wamasondo imiphumela yalolu vivinyo, uhlangabezana nohlangothi oluphansi kakhulu kunomoya ovundlile kunabancintisana nabo abakhulu ekujuleni komugqa ofanayo. Ukufika lapha, uBontrager uqale wahlola ukwakheka okumangazayo kwezinkulungwane ezingama-10 000 nge-software yekhompyutha. Babe sebethola ubujamo obuhle kakhulu benza amamodeli amaningana wabo base bewafaka emhubheni womoya ukuze ekugcineni bafeze ukwakheka okuhle, okungcono kakhulu ku-aerodynamics, amandla nokuzinza ngakunye kokujula kwemithathu yomugqa oyibona lapha namuhla kunikezwa kuziphambano ezingumoya. - Ngokomlando, okunye kokubi kwamarimu ekhabhoni kube wukusebenza kwawo amabhuleki ezimweni ezimanzi.
Manje, ngokwami, bengivame ukuba novalo, phakathi kwenqwaba, emanzi, ngoba ngangazi ukuthi kwakukude kangakanani phakathi kokudonsa isigwedlo kanye nokubopha amabhuleki. Ngakho-ke uBontrager uchithe isikhathi esiningi namandla ekubhekaneni nale nkinga. Indawo yokubopha amabhuleki kulezi inomugqa wokulawula i-laser.
Ngokuyinhloko, basebenzise i-laser ukwenza kahle uhlobo oluthile lokuthungwa ebusweni bokubamba amabhuleki, futhi kufanele kube yisinyathelo esikhulu sokuya phambili ngokusebenza kwebhuleki yamarimu ekhabhoni. (umdlandla womculo we-elekthronikhi) - Anginandaba nanamuhla, Matt, ngoba ngisebenzisa ama-disc brake. Manje, njengoba ngishilo, ngisesimweni esincane kunazo zonke zamamodeli abo amasha, ama-XXX 2.
ukusonga kanjani izibambo
Banesisindo esingu-1305 amagremu wohlobo lwe-brim brake version, noma ama-gram ayi-1380 walona. Kuyamangalisa, ngicabanga ukuthi uzovumelana nami. Futhi ungalahlekelwa amanye amagremu ayi-150 kulezi zisindo uma ukhetha uhlobo lwe-tubular.
Yize zilula kangako, zibanzi kakhulu njengamarimu. Ububanzi bengaphakathi lobubanzi balo bungamamilimitha angama-21, alungiselelwe amathayi abanzi anamuhla kusuka ku-25 kuye ku-28. UBontrager uncoma okungenani amathayi angama-23 mil, kodwa ngokuthembeka angiqondi ukuthi kungani ufuna ukuqina ngalezi zinsuku - ngoba uMat isn ' impela isisindo samasondo akhe sikhulumile, ngicabanga ukuthi kungcono ngimenzele lokho.
Noma kungamamilimitha angama-60 ukujula, amasondo akhe angena kuphela ngama-gramu ayi-1530 - kepha ngenxa yokuthi awami athopha kakhudlwana, lokho akusho ukuthi aweyona eyasemoyeni. Eqinisweni, esivivinyweni somhubhe womoya abawenzile, iBontrager ithole ukuthi le modeli ibisemandleni futhi iyashesha njengamarimu abanye babancintisana bayo abakhulu, okungama-50% ajulile ngoba ayisicaba kusho ukuthi i-crosswind udaba kula mabhayisikili. Angicabangi ukuthi ukukhanya kwazo akusho ukuthi aziklanyelwe ukuba namandla ngokwanele, hhayi nje umgwaqo kodwa ukushayela kwe-gravel uma ukhetha kanjalo, noma ngaphezulu kwamatshe amatshe esiwashayele eFlanders namuhla.
Futhi ayikho imikhawulo yesisindo kumgibeli kulawa mabhayisikili. Manje, ake sibhekisise irimu uqobo. U-DT Swiss unikeze okhulumela le nhlangano.
Manje izikhulumi ezingama-24 ze-Aerolite ngaphambili nangemuva. Ku-brim version yala masondo, nokho, ingu-16 ngaphambili. Futhi lelo inani elifanayo lama-spokes kuwo wonke amamodeli amathathu.
Futhi maphakathi nendawo, kuhabhu, lawa magobolondo avela eBontrager uqobo, kepha ngaphakathi lokhu kunikezwa futhi yi-DT Swiss. Futhi uyazi nje ukuthi lapho uzwa lelo gama, lizothembeka kakhulu. (umculo we-elektroniki we-R & B) - Isondo lesithathu yi-Aeolus XXX 4s.
i-carb ngebhayisikili ukunciphisa isisindo
Bahlala phakathi kwamasondo engigibele kuwo noDan namuhla futhi bathi bawumbondo wabo oyindilinga, muhle kakhulu kuwo wonke amathrekhi nemibandela - yebo, njengathi ama-XXX 2 akhombisile ukuhlolwa kukaBontrager, ukuthi la ngokuhambisana namanye amarimu ajulile encintisana nabo. Futhi-ke unethuba lokuhamba ngokushesha okukhulu ngenkathi unovalo oluncane ezimweni ezinzima. Empeleni kungahle kube nenzuzo ephindwe kabili, kungenzeka kungabi ngoba usengayisebenzisa ngenkathi izimbangi zakho zifinyelela amarimu athophayo.Kodwa ngaphambi kokuba siqede, Dan, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi amasondo ale rimu aseTrek HQ aklanyelwe futhi kwenziwa eWaterloo, eWisconsin, okuyinto enhle kakhulu akunjalo? Empeleni akuqediwe ngoba kukhona esikukhohliwe.
Ngisanda kukhumbula - Ini? Ukuphuza? - Cha, ukuhlolwa komsindo we-freewheel. - Kwenzenjani? - Sihlola umsindo we-freewheel. - Kulungile. - Ngisho, abantu bayahlanya kumazwana uma ukhohlwa. - Kufanele senze okungcono uma senza lokho - sithole imakrofoni lapha.
Usukulungele? - Ake silalele kancane - Nakekela iminwe yakho - Kulungile - Lokho akukhulumi kakhulu, akunjalo? - Awungezwa ngempela ngalo moya. - Cha, ingabe lokho kuhle noma kubi? - Angazi empeleni. Yebo, ngineqiniso lokuthi ababukeli bethu bazosazisa esigabeni sokuphawula ngezansi. - Yebo bayokwazi. - Kulungile, awu, uma uyijabulele le ndatshana, ungasinika izithupha uma ufuna, ngezansi.
Okungenzeka, kulo nyaka iTeam Trek-Segefredo izosebenzisa la masondo wohlobo lwe-tubular kuyo yomibili imijaho yeTour of Flanders neParis-Roubaix lapho, lapha phansi kuphela.
Ngabe izintambo zeBontrager azinantambo?
I-Bontragerukhethe ukusebenzisa ubuhlalu obuxhunyiwe esikhundleni seengenantamboimiklamo eqashwe ukuthandwa kwe-ENVE ne-Zipp kokwakamuva kwaboamasondo.Izinsimbi ezingenantambozisetshenzisiwe ebhayisikili lasentabeniamasondoisikhathi esithile.Sep 4 2020
Umlandi: Lawa ngamasondo amasha sha eZipp 303S athengeka kalula, alula, futhi abonakala eshesha ukwedlula amasondo angama-302 abawashintshayo. Lokho kubonakala kungabenzeli ubulungiswa, njengoba iZipp ithi bathuthukise ukusebenza kahle kwaleli sondo laze lafika ezingeni lapho ukusebenza kudlula khona i-303Firecrest yakudala, efike emakethe emuva ngo-2016 futhi ebiza imali ephindwe kabili. Ngokwethembeka konke, ngifuna wazi ukuthi uZipp ukwenze kanjani lokhu, ngakho-ke ake ngikugcwalise.
Okokuqala, yebo, ngisavaleleke endlini yami, kepha okumangazayo ukuthi nginezandla zobuchwepheshe obusha obushisayo. Ngibonga kakhulu kuZipp ngokungithumela nangokuphendula ngesineke yonke imibuzo yami ukuze ngikwazi ukukunikeza imininingwane enamanzi ku-808 nakumasondo e-disc. Ukujula okuningi kunamamodeli ahlukene namanani.
Ngine-Firecres t, i-zip yakudala enezimpawu zayo ezisetshenziswayo nezihlukunyezwayo ngaphakathi nangaphandle komgwaqo. I-NSW ekhulisa ukusebenza ngisho nokuqhubeka, bese uba ne-302, eyenza lula lonke ulwazi lwekhabhoni ne-aero futhi yalufaka ku-wheelet engabizi kakhulu. Manje sesinezinto ezingabizi kakhulu, ezikhanyayo, nezisheshayo ezingama-303 S.
Okucacile, okujabulisayo emgwaqeni, kanye nokuvulwa futhi okungenasifo okulungele. Zikhiphani? Ngokwengxenye enkulu, bathole i-logo entsha, yokuqala. Ake sikhulume ngalezi zinzuzo zokuqala, akunjalo? UZipp uthi le 303 S ingama-watts ayi-10 asebenza kangcono kunalokho i-Firecrest yabo yango-2016 303 iku-40 km / h.
Ukushiya eceleni isikhashana ukuthi laba bashesha ukwedlula abafowabo ababiza kakhulu, ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu futhi kuyathakazelisa ukuqaphela ukuthi iZipp ishintsha ngokushesha indlela ebalwa ngayo, futhi lokho kungenxa yokuthi iZipp ithi basuka emihubheni yomoya nje baye ezingeni eliphelele izivivinyo ezingabandakanyi i-aerodynamics kuphela, kepha futhi namathayi, namandla futhi. Amasu ayo wokuthola idatha asethuthuke kakhulu kangangokuba manje usungathola imiphumela enembile futhi ephindaphindwayo ngaphandle ngenduku ye-aero elinganisa imininingwane yomoya nemoya ngesikhathi sangempela. Onjiniyela beZipp ngokuyisisekelo bekufanele bachithe amahora amaningi beshayela benyuka behamba ezitaladini ngomgwaqo ku-40 km / h.
Lezi zinto zihlangana kanjani emhubheni womoya? Angazi. UZipp uthi nabo abasheshi kangako, futhi kunalokho baveza ukuthi yimininingwane yabo yangempela ekhombisa ukuthi bangama-watts ayi-10 asebenza kangcono ku-40 km / h emigwaqeni eshelelayo, ngoba ezindaweni ezimbi lowo mehluko ubonakala ukwanda ngisho ngokuqhubekayo. Kanjani? IZipp yaklama lezi ukuze zikwazi ukuhamba kahle emoyeni ngamathayi ububanzi obuyi-28 millimeter.
Leyo yingxenye enkulu impela yalokhu kukhula okuphelele kokusebenza kahle ngoba amathayi abanzi ayagingqika ngokungahambisani okuncane futhi angaqhutshwa nengcindezi ephansi, nayo ekhulisa ukusebenza kahle kokugingqika. Ababukeli bazothola ukuthi kuncane komehluko kunalokho okukhona phakathi kwangaphakathi nangaphakathi, futhi yebo uqinisile ngoba lokhu akunazingwegwe. Umphetho wendabuko unengwegwe encane phezulu ngaphakathi kohlangothi lwe-rim sidewall, kepha ngentuthuko yakamuva kubuchwepheshe bamathayi, awusakudingi lokho.
Ungayisusa futhi uthole izinzuzo eziningi kuyo. Enye yazo i-aerodynamics. I-Hookless isho ushintsho olubushelelezi ukusuka kusondo uye erimu oludala isiyaluyalu esincane kunalokho osika emoyeni.
Njengoba ububanzi bomphetho wangaphakathi bungaba banzi, isondo lishaya kancane ngaphezu komugqa, nakho okudala ukuxokozela okuncane. Okunye okusezingeni lomphetho nakho kushintshile ngokufanele, ama-millimitha amadala angama-302, ama-45, kepha irimu incane kakhulu ekhaleni kunalabo ababengaphambi kweZipp. Kuthiwani ngesisindo ke? Angamakhilogremu ayi-165 alula kunama-302 eza phambi kwawo, okusho ukuthi angama-intshi angu-1,530 kuphela ebhakedeni.
izinto ozimele zebhayisikili
Lokho kungu-710 ngaphambili kuthi ngemuva kube ngu-820. Kuyavunywa, akusikho ukukhanya okuyisiphukuphuku, okuyisiphukuphuku, kepha ngebhayisikili lalokhu kujula, amandla, kanye nentengo, ngingasho ukuthi kuhamba kahle. Unjani? Ukukhanya okuningi lapho? UZipp uthi ukuqhubekisela phambili inqubo yokwakha, ukwakheka kwesikhunta, nokwakheka kwekhabhoni kubenze bakwazi ukusebenza kahle ngezinto ezincane.
Esinye sezinyathelo ezinkulu phambili kwaba, ukumangala, ukumangala, ukuhamba ngaphandle kwengwegwe; ungashintsha indlela abalolonga ngayo isisekelo se-rim. Ushintsha kusuka ku-mandrel ethambile uye esimweni sensimbi esivumela ukucindezelwa okungaphezulu. Ungasebenzisa i-resin encane ne-carbon encane kule ngxenye yomugqa.
Uma ukukhathazeka ngamandla, awudingi ukuba njalo. Ngicabanga ukuthi kufanelekile ukuthi iZipp ibilokhu iyingozi uma kuziwa ekwakhiweni Kovivinyo lomthelela banamandla njengabaphambi kwabo, kepha lokhu namanje banomthelela wokuphila nempilo yomonakalo ehlanganisa wonke umonakalo ngenkathi ushayela. Unjani? Hhayi-ke, lawa ngamasondo okuqala e-carbon Zipp enziwa ngaphandle kwe-U.S.
I-SRAM, inkampani engumzali we-Zipps, inendawo yayo yokukhiqiza ikhabhoni eTaiwan futhi ikwenze ngokuphelele ukukhiqizwa kweZipp Indianapolis Process laphaya, kodwa-ke iZipp nayo ithi ngokwenza lokhu kulungiswa ekwakhiweni kwezakhiwo, njengokungaxhunywanga, bakwazi ukuyenza iphumelele kakhudlwana. Baphinde bathi ngoba balula, kunezinto zokusetshenziswa ezingaphansi kakhulu lapha. Awuvamisile ukuzwa abakhiqizi bethi into ishibhile ngoba ilula, kepha iphakeme-emihlanu nxazonke.
enzelwa kuphi amabhayisikili okuhamba
Kuthatha isikhashana ukubuyela kulokhu kepha kufana nezinto eziningi ezipholile ezenzekile kepha okunye umehluko osobala kakhulu kumavili amasha yizitika ezintsha. Ilogo ye-Zipp yakudala iyashintsha kusuka kulokhu kuye kule. Abathandi bokhozi bazobe bekuqaphelile lokhu hhayi kuphela kumavili amabhayisikili asezintabeni akhishwa ngonyaka owedlule, kepha nasemasondweni iqembu laseMovistar elalisebenzisa ekuqaleni konyaka.
Amaphuzu amabili okugcina kufanele kukhulunywe ngawo kuqala izikhungo zithi zine-ekseli elifanayo lokuthwala ne-freehub njengalezo ezisetshenziswe kumasondo e-Firecrest eminyakeni yamuva nje, kodwa lapha umehluko empeleni usema-spokes nangendlela abangena ngayo kuhabhu. Lezi zisebenzisa ama-J-bend spokes, kanti iFirecrest isebenzisa ama-spokes-pull spokes. Ekugcineni, inothi elibaluleke kakhulu mayelana namathayi owasebenzisayo.
Kubalulekile ukuthi usebenzise amathayi alungile angenashubhu kulawa marimu njengoba ukubekezelelana okuphezulu kanye nobuhlalu obuqinile bamathayi angenasifo kusho ukuthi abayidingi leyo design yendabuko yokusebenza. Ungasebenzisa ithubhu elingaphakathi lapha, kepha uzowadinga la mathayi alungele isondo. Maduze sizoba nenye indatshana ongangena kuyo kwizivumelwano zokuhlola ezintsha zikaZipp. ngoba kuyikhefu elikhulu lomkhiqizo futhi bakutholile nakanjani ukuqonda okuthokozisayo futhi okuwusizo olukhulu, okunye okungenzeka ukuthi sekuvele kutholakala ku-calculator yabo entsha yokucindezela amathayi, lapho i-algorithm yakhelwe kulo lonke ucwaningo lwabo lwakamuva .Ngibe nokudlala okuncane.
Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu. Sizofaka isixhumanisi salokho encazelweni engezansi kwalesi sihloko. Lokho ukubuka konke okufushane kakhulu kwe-303 S.
Atholakala ezitolo ngaphansi nje kwe- $ 1,300 noma ngaphansi nje kwe- £ 1,000 kulaba bobabili, njengoba ngishilo ekuqaleni, okubenza babe ngamaziphu ashibhe kakhulu ekhabhoni kuze kube manje. Qiniseka ukuthi usazisa ukuthi ucabangani esigabeni sokuphawula ngezansi futhi sicela unikeze le ndatshana isithupha esikhulu.
Enziwa kuphi amasondo eContrager carbon?
Angakanani amasondo eBontrager Race anesisindo?
Ku-1660 Grams lawa akuwona ama-grincher ayi-1400-1200 nawo anomusaIsondo likaBontragerima emugqeni. Kepha besingeke sibathengise njengabakhulu kakhuluamasondoizinsuku ezinzima nokuqina okukhulu.
Ngabe iBontrager ilungile iReddit?
I-Bontragerinikeza ezinyekuhleizinto nxazonke, azikho izikhalazo. Impahla efanele nomcabango ungena ezingutsheni futhi angitholi lutho ngokukhethekile engingakhetha kulo.Meyi 6, 2016
Yini ibhayisikili leTrek lelula kakhulu?
ngoLwesihlanu wethule okusha kwawoibhayisikili,UkuhambaI-ondamonda SLR 9, usuku ngaphambi kokuqala kwe-104th Tour de France. Inkampani iWaterloo, eWisconsin ithi iyonaibhayisikili elilula kunawo wonkeyenziwe futhi ielula kakhuluumgwaqo wokukhiqizaibhayisikiliemhlabeni. Uhlaka lwe-56cm Émonda SLR 9 lunesisindo esingu-640 gram (amakhilogremu angu-1.41).Juni 30. 2017 Nov.
Ngabe ibhayisikili iTrek libiza imali?
IngabeTrek ibiza imali? Yebo,Amabhayisikili wokuhambakukhonaibiza imali.Ukuhambaupakisha ubuchwepheshe bokugcina obuphezulu kuboemabhayisikili, bakhe i-emabhayisikiliazungeze ozimele bekhwalithi ephezulu ye-aluminium kanye nekhabhoni, futhi usebenzise kuphela izingxenye ezithembekile ze-Shimano ne-SRAM.Ephreli 23 2021
Ngabe iTrek ibhayisikili ilungile iReddit?
Ukuhambakulungile. Thola ifayela le-ibhayisikiliuthanda, ukuthi unethezekile, futhi ungaphakathi kwesabelomali. Uma uthandaukuhamba ngebhayisikiliungahlala uthengisa i-ibhayisikilifuthi uthenge enhle.2 uNovemba. Okthoba 2018
Yini ibhayisikili lomgwaqo elilula kunawo wonke emhlabeni?
ngoLwesihlanu wethule okusha kwawoibhayisikili, iTrek Émonda SLR 9, usuku ngaphambi kokuqala kwe-104th Tour de France. Inkampani iWaterloo, eWisconsin ithi iyonaibhayisikili elilula kunawo wonkeyenziwe futhi ielula kakhuluukukhiqizwaibhayisikili lomgwaqoku-umhlaba. Uhlaka lwe-56cm Émonda SLR 9 lunesisindo esingu-640 gram (amakhilogremu angu-1.41).Juni 30. 2017 Nov.
Izifudumezi zamadolo okuhamba ngebhayisikili
Lithini ibhayisikili elilula kunawo wonke emhlabeni?
Futhi isisindo esiphelele sokwakha se-Vial Evo Ultra kusuka kuma-maestros aseJalimane we-carbon fiber Ax-Lightness, okwenza kubeelula kakhuluumgwaqo wokukhiqizaibhayisikili emhlabeni.
Yiliphi isondo lebhayisikili elihle kakhulu leBontrager ongalithenga?
Isisindo esincane, esitebeleni futhi esishesha, amasondo eBontrager ayindlela yomlilo eqinisekile yokwenza ngcono ukusebenza kwakho. Bheka ukubuyekeza kwethu kwalawa maRace Lite Wheels bese ubona ukuthi ukuthuthuka kungawushintsha kanjani umdlalo.
Ingabe iBontrager isebenzisa uhlobo luni lwamabhuleki?
I-Bontrager iphinde yengeza ithrekhi entsha ye-laser-etched brake yomugqa we-Aeolus XXX, nayo enezinguqulo ezingezansi ezijule kakhulu ku-2 (28mm) no-4 (47mm), kanye nezinketho zamabhuleki nezindlela eziyizigaxa kuzo zonke izindawo eziphakeme. Ngemuva kokugibela amasondo ezinsukwini eziningi ze-blustery eColorado, ngingasho ukuthi amasondo aphatha ngokuthula ama-hoop ajulile.
Yini eyenza iBontrager line pro 30 wheel ibe yinhle kangaka?
Ithimba lobunjiniyela lakwaBontrager lisebenze i-OCLV carbon layering yalo ukuhlinzeka amasondo ngenani elifanele lobulukhuni namandla ngenkathi kugcinwa isisindo sincane. Idizayini entsha yamasondo iphinde yathuthela ekujuleni okujule kakhulu kwe-27mm rim ukuvumela ukuthobela okuningi, okungukuthuthuka okuhle kusuka ekwakhiweni kwamasondo angaphambilini.